Maxay Ahayd Farriintii Layaabka Lahayd Ee Adama Traore Uu U Diray Liverpool Kaddib Ciyaartii Xalay Iyo Ereyadii Ka Horreeyey Ee Jurgen Klopp Usii Qaddimay? - Gool24.Net
Maxay Ahayd Farriintii Layaabka Lahayd Ee Adama Traore Uu U Diray Liverpool Kaddib Ciyaartii Xalay Iyo Ereyadii Ka Horreeyey Ee Jurgen Klopp Usii Qaddimay?
Adama Traore ayuu ahaa xiddigii dhuunta u galay Liverpool intii ay socotay ciyaartii Wolves iyo Reds ee xalay, waxaana uu nefis iyo nasashoba u diiday xiddigihii uu Jurgen Klopp garoonka usoo xushay garoonka, kuwaas oo waqti badan ku bixiyey sidii ay isaga u qaban lahaayeen.
Andy Robertson oo ka mid ahaa ciyaaryahannada saamiga ugu badan ku darsada weerarka iyo goolasha ay Liverpool soo dhalinaysay xili ciyaareedkan, ayaa waxa uu dabada geliyey goolkiisa isagoo ka baqayey Traore, sidoo kalena Virgil van Dijk ayaa waqti ku bixiyey sidii uu u caawin lahaa Robetson amaba uu u qaban lahaa marka uu khadka dhexe ama garabka kale ee Arnold uu kasoo galo, laakiin Van Dijk iyo Robetson labaduba waxay noqdeen kuwo awoodi kari waayey inay xakameeyaan Traore.
Bilowga qaybtii labaad, waxa uu Van Dijk hortiisa ka qaaday kubbad uu Raul Jimenez dhaliyey oo meel horena lagu soo jiidhay Robertson, marar kalena waxa uu ku dhowaaday inuu isagu gool ka dhaliyo, halka kubbado badan oo uu isagu ka keenay dhinaca midigna ay halis geliyeen Liverpool.
Markii ay ciyaartu dhamaatay, tababare Jurgen Klopp oo warbaahinta la hadlay ayaa si aan hore looga baranin u amaanay Traore, waxaanu ku tilmaamay laacib aanay cidina la ciyaari karin oo qabashadiisa lagu daalayo.
“Waa laacib aan lala ciyaari karin waqtiyada qaarkood, waa mid aan la rumaysan karin. Allah muxuu ciyaartoy yahay, aad ayuu u wanaagsan yahay.” Ayuu Jurgen Klopp yidhi oo la hadlayey BBC Sports.
Intaas kaddib waxa telefishanka BT Sports la hadlay Adama Traore, waxaanu u hambalyeeyey Liverpool oo uu sheegay inay horyaalka ku guuleysatay, sidoo kalena waxa uu xusay in kooxdiisu ay si fiican u ciyaartay.
“Maaha inaanu illowno inay yihiin koox wanaagsan, koox cajiib ah oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan amaba tan ugu fiican Yurub.” Ayuu Traore ku bilaabay hadalkiisa.
“Waan ugu hambalyeynayaa sida ay horyaalka u wadaan, laakiin annaguna waanu dagaallanay, waxaananu sii dagaallami doonaa illaa dhamaadka.” Ayuu ku daray.
Adama Traore waxa uu sheegay in kooxdiisu ay u qalantay inay guuleysato ama ugu yaraan ay barbarro ka hesho ciyaarta, waxaanu yidhi: “Maanta si fiican ayaanu u ciyaarnay, si adag ayaanu ciyaarta oo dhanna uga shaqaynaynay, laakiin waxa murugo ah in aanaan guuleysanin ama aanaan barbarraynin, waa se in aanu hore u socono, shaqayno oo waxyaabaha taban qaadano, dagaalkana ku jirno illaa dhamaadka. Niyad-jabka aanu qabnaa waa in aanaan dhibco helin laakiin waxaanu ka qaadanay khibrad.”